itnadamtui: Zawgyi Font For Windows764-Bit And Other OS
Windows764-Bit မှာ ဇော်ဂျီ Font ရေးလို့မရတဲ့သူတွေရော ၊ တခြားသော OS တွေမှာ ဇော်ဂျီ Font ရေးလို့မရတဲ့သူတွေရော အားလုံးအဆင့်အောက်လို့ ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Keyboard Installer လေးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးကိုပေးရသလဲဆိုတော့ OS တော်တော် များများက ဇော်ဂျီ Installer နဲ့ အားလုံးအဆင်
ပြေတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Windows ပြန်တင်ပြီး ဇော်ဂျီ Font ကို Install လုပ်ပြီး သုံးတဲ့အခါမှာ တခါတလေမရကြပါဘူးခင်ဗျား။ ရလားမရလားသိ ချင်ရင်တော့ ဇော်ဂျီ Font ကို Install လုပ်ပြီး Restart လိုက်ပါခင်ဗျား။ ပြီးရင် Control Panel\_Reigon and Language\_Keyboards and Languages\_
Change keyboards...\_General ကိုသွားပြီး Alpha Zawgyi ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ အပုံတိုင်း ဘဲ ဘာမှ မပေါ်နေဘူးဆိုရင်အခု ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ဇော်ဂျီ Keyboard Installer လေး နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျား။ ပုံမှန်ကတော့ အဲ့ဒီမှာ လေးထောင့်အကွက်လေးတွေ ပေါ် နေတက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်လဲ ဇော်ဂျီ Font Installer လေးနဲ့ သုံးခဲ့တာ Vista ရော ၊ Windows7Enerprise Edtion 32-Bit ရောအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မနက် Windows7Ultimate Edition 64-Bit ကို Download ပြီးတင်
လိုက်တဲ့အခါ ကြတော့ ဇော်ဂျီ မြန်မာစာကို Install လုပ်ပြီး ရေးကြည့်တာ ဘာမှာကိုမပေါ် တော့ဘူးခင်ဗျ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။ ဒါမေဲ့ဘယ်ကောင်မှ အကြိုးမပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Internet ပေါ်မှာရှာရင်း ရှာရင်း တွေ့သွားတာ တာပါ။ ကျွန်တော့လိုမျိုး အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဖြစ်နေတဲ့
သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ပြန်ပြီး Share လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးဘဲလိုချင်ရင်အောက်မှာဘဲ Download
Download ဇော်ဂျီ-မြန်မာ Keyboard Installer
Indsendt af itnadamtui kl. 22.59
Etiketter: Hacking, windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Zawgyi-One Font
Tina Kyi 9. december 2011 kl. 03.02
Can you help me to upload from mediafire ? Your current link is already expired
athida 21. december 2011 kl. 08.29
I installed Myanmar front for window7many times with many ways but cannot .
now i got it with yr keyboard installer.
Si 2. januar 2012 kl. 16.58
I cannot get your link. why?
အောင်ကျော်ထွန်း 3. januar 2012 kl. 12.23
Ye Myint 6. marts 2012 kl. 18.38
Can you please update the link to download that keyboard installer.
AKT 6. marts 2012 kl. 19.28
kma1975 8. april 2012 kl. 06.21
Thank you so much. Appriciate it.
thuraboarch 11. oktober 2012 kl. 17.20
bluesea 14. december 2012 kl. 19.51
Bro အဆင်ပြေပြီလား မသိဘူးနော် ကျတော့်စက်လည်းအစ တုန်းက အဲ့လိုပါပဲ ရေးလို့တော့ မရဘူး ဖတ်လို့တော့ရတယ် အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် ကျတော်ထပ်ပေးလိုက်မယ်နော် ဒီဟာက ဂျီတော့မှာရော ဆိုဒ်တွေ အားလုံးကို ရေးလို့ရ ဖတ်လို့ရပါတယ် ပထမ ဦးဆုံး ဇော်ဂျီဖောင့် ကိုအရင် ရမ်းထားပါ ဇော်ဂျီဖောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဒီမှာ http://www.alpha.com.mm/zawgyi/zawgyi.html
နောက်ဆုံးဗားရှင်း ၁၂ ကို ဒေါင်းပြီး ရမ်းထားပါ ။ ပြီးရင် ဒီမှာ ထပ်ပြီး ဇစ်ဖိုင်နဲ့ http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/downloads/detail?name=zawgyi-keyboard-layout-l.zip
ကိုဒေါင်းပြီး zip ဖိုင်ကို ဖြည်ပြီး ရမ်းလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် မရသေးဘူး ဆိုရင် ရီစတပ် ပြန်ချပြိး ပြန်တက်လာရင်တော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ။ကျတော့ စက်က Windows7Home Premium 64 bit ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Myo Min 3. marts 2014 kl. 07.26